Shiinaha Mixer soosaarayaasha baaldi iyo alaableyda | Mashiinka Dongheng
Astaamaha baaldiheena isku qasan
Boqorka baaldi fiicni fiicani wuxuu leeyahay 2 nooc oo ku habboon isteerinka sagxadda iyo dhajiyaha gadaal dambe iwm awoodda ugu badana waa la gaari karaa 300L.
Boqorka baaldi fiicni waxa uu isticmaalaa shaambad isku duubni ah si uu uga ilaaliyo dhoobada. Sidan oo kale, cimriga dhalmada ayaa sii dheeraan doona.
Furitaanka hawo ee hoose ee baaldiga wax lagu qaso iyo sidoo kale dhuumaha wax laga dejin karo ee furi kara, waxaad si fudud ku yeelan doontaa xakamaynta maxium wax kasta oo ku shub.
Xidho walaxda iska caabin ah
Baaldiga iyo daabku waxay ka samaysan yihiin qalab xoog u adkaysi u leh dharka, taas oo adkaynaysa in la xidho inta lagu jiro hawsha.
ISUGU SHAQAYN SARE
Farsamooyinka xakamaynta tayada sare leh iyo xirmooyinka isku xirka korontada ee gudaha ku jira waxay ka dhigayaan baaldi isku darka 'KINGER' inuu muujiyo waxqabad wanaagsan oo soo saarida shaqo adag.
KINGER la taaban karo fiicni baaldi ku lifaaqan si fudud u qaadataa culeyska ka soo saarka shaqo adag, kuwaas oo ku yimaado laba cabbir si loo badbaadiyo waqtiga shaqada aad la model noo awoodaa in ay isku daraan oo ay u qaadaan ilaa 300L la taaban karo hal load. Saxanka adabtarada ayaa looxidhay si uu uguhabo nooc walboo isdabajooga ah Sida gadaal gadaha, waxaan soosaari karnaa sida cabirkaagu ugufilan karo mashiinkaaga.
Xagga sare waa qeexitaankeena baaldi iskudhafka ah ee tixraacaaga.Waxa lagu dhejin karaa dhammaan isteerinka iyo gadaal dambe.
Hore: Qorshaha jirida